Izazi Zebhola Lezinyawo zase-Asia kanye Nezindaba Ze-Untold Biography
Ikhaya IZITOLO ZASESI FOOTBALL
Abaqeqeshi bebhola lezinyawo base-Asia bonke baneZindaba Zobuntwana. I-LifeBogger ikutshela lezi zindaba, ezinezikhathi eziningi ezingalibaleki ezijabulisayo nezijabulisayo.
Kungani Izindaba Zobuntwana Zabadlali Bezinyawo Ze-Asia?
Muva nje, cishe ngonyaka we-2016, sibone igebe elikhulu lolwazi elikhona kwiwebhu. Kuyinto ehlobene nokuntuleka kokuqukethwe okwenele mayelana nabasubathi bebhola base-Asia.
Ukuvala igebe leli, abakwaLifeBogger banqume ukwakha isigaba se-Eshiya, ngenhloso yokudiliva izindaba Zobuntwana kanye ne-Biography Amaqiniso ezwekazi lebhola lezinyawo.
Mayelana nokuqukethwe kwethu kwebhola lase-Asia
Izindatshana zeLifeBogger zigcina ukugeleza okunengqondo kuzo zonke izindaba zayo. Amaphuzu alandelayo azokusiza uthole ukuqonda okungcono kokuqukethwe kwethu kwe-Asia.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, sikulethela izindaba zobuntwana bebhola lezinyawo zase-Eshiya, kusukela ngesikhathi sokuzalwa kwabo, kokuhlangenwe nakho kwabo kwempilo yokuqala.
Siphinde sikulethele imininingwane ngesizinda somndeni nemvelaphi / izimpande ze-Asia Footballers. Futhi, abazali babo (obaba nabomama).
Okwesithathu, sikutshela imisebenzi yabo Yobudala Bokuqala nalabo abanokuhlangenwe nakho (okuhle noma okubi) okwabenza babona ukubizwa kwabo kwebhola.
Indaba iyaqhubeka nokwenzeka eminyakeni yabo yokuqala yokusebenza.
Okulandelayo Indaba Yethu Yomgwaqo. Lapha, sichaza ukuthi yibaphi abadlali bebhola base-Asia abaphumelele.
Indaba yethu yeRise to Fame ibuye ichaze izindaba zayo zeMpumelelo kanye nesimo samanje sodumo.
Sibe sesiya phambili ukukuvuselela ngezindaba zabo zothando (izintombi namakhosikazi).
Okulandelayo, amaqiniso maqondana nokuphila komuntu siqu kwama-footballeers ase-Asia.
Iqembu lethu liba nokwazisa ngamalungu emindeni yabo, kanye nobudlelwano namalungu omndeni nezihlobo.
Okulandelayo yi-Lifestyle Amaqiniso, iNetworth kanye neMholo.
Okokugcina, sizokulethela ama-Untold Amaqiniso owawungakaze wazi ukuthi ukhona mayelana nabadlali bebhola base-Asia.
Ngokufingqa, sikholwa ukuthi lesi Sigaba sizosiza ukuvala izikhala ekuthini kunemininingwane eyanele mayelana nabasubathi bebhola base-Asia Izindaba Zobuntwaneni futhi Amaqiniso we-Biography. Ngenhlanhla, abalandeli bebhola manje sebeyawubuka umdlalo futhi ngasikhathi sinye, bafundeni izindaba ezimangalisayo ngabadlali ababasekelayo.
I-LifeBogger ilwela ukunemba nokungakhethi enkambisweni yayo engaguquki yokuhambisa izincwadi zebhola. Ngiyacela Xhumana nathi uma ubona noma yini engabukeki ilungile kunoma iyiphi imibhalo yethu.
Manje kufika izindaba zethu zebhola lase-Asia.
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Januwari 24, 2019 0
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Julayi 22, 2018 0
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Septhemba 23, 2018 0
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Julayi 23, 2018 0
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Disemba 18, 2017 0
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Disemba 18, 2017 2